Kusho "Droperidol" imfundo manual uchaza njengenhlangano izidakamizwa antipsychotic, okuyinto butyrophenone esuselwe abese ehlala umsebenzi antiarrhythmic futhi kataleptogennoy. Ukusetshenziswa kwalesi imithi ine phezu nesineke uzwakalise antishock, neuroleptic nomphumela antiemetic. Ukunciphisa umphumela arrhythmogenic futhi pressor ka epinephrine, ukwehla yamaphaphu Umthambo wegazi, ukunwetshwa imithambo yegazi neuropathy, nokuncipha letindzala ukumelana semithambo futhi ihlinzeka ukulungiselela "Droperidol". Lo mshini wezenzo ejenti antipsychotic esekelwe-alpha-adrenergic Ukuvinjwa nemaphakathi Dopamine receptor.
Umuthi kukhishelwa ngesimo isixazululo umjovo e ampoules ivolumu ezimbili, emihlanu noma eyishumi namamililitha. Njengoba i-elementi asebenzayo indlela yokwakheka izidakamizwa antipsychotic ifakiwe droperidol.
Ngokuqondene isicelo sale izindlela, inkomba main inhloso yazo kuyinto neuroleptanalgesia (ngokuvamile lihambisana fentanyl). Le nkulumo ibhekisela emthanjeni ukubulawa kwezinzwa okuvamile, lapho umuntu oqotho, kodwa hhayi ukuzwisa ubuhlungu noma imizwelo. Kulokhu, kakhulu esebenzayo ukulungiselela "droperidol" (yokusetshenziswa kuqinisekisiwe) isetshenziswa ngesikhathi belungiselela izinzwa, kuhlinzwa, endoscopic kanye nalokunye kungenelela wezinsimbi. Izinkomba ngoba lokhu remedy nazo pectoris ezinzima angina, isilethikusebenza, ukushaqeka ubuhlungu nosizi, crisis abanomfutho wegazi ophakeme. Lapho lengqondo excitation, edema yamaphaphu, futhi babone izinto ezingekho nazo Kunconywa ukuba asebenzise izidakamizwa "Droperidol". Izimpawu zihlanganisa kokubili ukuhlanza nesicanucanu ngesikhathi ezinqubweni zokwelapha kuhlinzwa noma yokuhlola.
Sebenzisa antipsychotic asebenzayo ngokuqinile contraindicated esimweni a hypersensitivity isiguli noma kuphazamiseka extrapyramidal. Ngesikhathi ekhulelwe njengoba akusiyo kunesidingo sokujuba ejenti "droperidol." Yokusetshenziswa vala ukusetshenziswa kwezidakamizwa esikhathini lactation. Ngaphezu kwalokho, contraindication oqondile ingaphansi kweminyaka engu-iminyaka emibili. Futhi ekugcineni, ungasebenzisi leli imithi antipsychotic phakathi kwesigaba cesarean.
Uma sikhuluma kungenzeka ukusabela ezingezinhle ezihlobene nokusetshenziswa kwaleli thuluzi, kufanele siqale sithole ingozi hypotension, dysphoria noma ukucindezeleka. Ukozela, izimpawu extrapyramidal, isiyezi, ukuhhema, bronchospasm, liqhaqhazela, ukucasuka kanye ukungahlaliseki kungase nakulokho ngenxa yesimiso sokuqondisa 'Droperidol ". Yokusetshenziswa Amanothi namathuba amancane nesenzakalo ukusabela anaphylactic kanye nokuthuthukiswa nomfutho wegazi ophezulu (in the case of ukusetshenziswa ngesikhathi esisodwa fentanyl).
Beaches Divnomorsk - ngezithombe nokubuyekeza. Thola ukuthi iyiphi amabhishi e Divnomorsk
Nematodes on a sitrobheli. Yini okufanele ngiyenze?
Kanjani ukugubha iminyaka engu-55 somshado?